Sonos Play: 5 bụ otu n'ime ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi kachasị elu n'ahịa, anyị nyochara ya | Akụkọ akụrụngwa
Sonos Play: 5 bụ otu n'ime ndị ọkà okwu amamịghe kachasị elu na ahịa, anyị nyochara ya
Miguel Hernandez | | Emelitere na 17/02/2020 11:52 | General, Nyocha
Anyị bụ na oge nke Homelọ Google na HomePod n'etiti ndị ọzọ. Na ahịa a pụrụ iche ọ na-eguzo ọtọ karịa ihe niile Amazon na mbipụta ya Kpaa aka. Agbanyeghị, ndị na-ahọrọ ịdị mma na ndakọrịta ekewaala obi, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na enwere mmeri doro anya nke dịla n'ahịa ruo ogologo oge, anyị na-ekwu otu ugboro ọzọ Anyị na. Anyị na-eche ihu otu n'ime ụlọ ọrụ ntanetị kacha mma na ọgụgụ isi na ahịa.
N’ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi pụrụ iche, ha enwebeghị ụjọ ọ bụla dị n’aka ha mgbe ha tozuru ya dị ka ndị kachasị ekwu okwu nke Sonos nwere n’ụlọ ahịa ha. Nke bụ eziokwu bụ na ọ hapụrụ ezigbo uto n'ọnụ anyị, ọ bụ ezie na ahụmịhe na otu ụzọ Sonos One dịkwa ezigbo mma. Ka ọ dị na mbụ, anyị ga-enyocha nkọwa kachasị mkpa nke obere ọkà okwu a nke Sonos mere ka anyị nwee.
N’oge na-adịghị anya, anyị ga - enye gị nkọwa doro anya n’etiti Sonos Play: 5 na Apple ọzọ, HomePod, dị na webụsaịtị nwanne anyị nwanyị, www.iPhone.com taa
1 Nka na ụzụ: qualityda dị elu dị elu na ndakọrịta dị elu
2 Njikọta na ndakọrịta: Otu Sonos maka onye ọ bụla na ihe niile
3 Ogo site na ọkọlọtọ, bụ ngwaọrụ Sonos
Nka na ụzụ: qualityda dị elu dị elu na ndakọrịta dị elu
Ọkà okwu ahụ kwuru isii 'D' dijitalụ amplifiers iji nye anyị ụda kachasị mma na ndị isi okwu isii agbakwunyere na ya. N'ụzọ dị otú a anyị nwere atọ tweeters na frequencies dị ugbu a na nkwupụta ụda dị elu, yana atọ ndị ọkà okwu na-enyekwa otu ụda na-elekọta nke na-enye ihe kasị adịchaghị ọrụ ahụmahụ na o kwere omume. Etinyela ndị ọkà okwu na igbe ahụ na-aga n'ihu (atọ na atọ) iji duzie ụda ahụ n'ụzọ kachasị mma.
O buru ibu maka ihe anyị jiri mara ụda, na arọ dị na mbụ na Sonos. Agbanyeghị, atụmatụ ya, n'agbanyeghị na ọ pere oke mpe, pere mpe, yabụ na ọ gaghị adị njọ n'ụlọ ọ bụla ma ọ bụ arịa ụlọ, anyị ga-eme ihe n'eziokwu, Sonos n'ihe banyere imewe bụ mgbe niile dị elu nke ndị na-azụ ahịa nwere ngwaahịa gị. na-eduzi. N'ihi ya ọ obtains akụkụ nke 203 × 364 × 154 mm (8,03 × 14,33 × 6,06 ″) na ngụkọta ịdị arọ nke kilogram 6,36.
The n'ihu grille nke ngwaọrụ mere nke graphite, dị ka na ngwaahịa Sonos ndị ọzọ, ebe shei polycarbonate na-enye ụdị abụọ dị iche iche, otu na-acha ọcha na nke ọzọ na oji, isi na obere obere agba nke ga-adịkarị mma ọ bụla. Sonos anaghị enye gamut agba agba, mana o zuru oke maka ọtụtụ ndị ọrụ. Onwe m, echere m na ngwaọrụ ndị Sonos na-adị mma karịa ọcha karịa nwa.
Njikọta na ndakọrịta: Otu Sonos maka onye ọ bụla na ihe niile
Ejiri Sonos mara oge niile, ọ nwere ike ịgba ọsọ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ụda ọdịyo (Spotify, Deezer, Tidal, Google Play Music, Napster, 7Digital, TuneIn, SoundCloud, Mixcloud). Anyị ga-enwe ike mụta nwa AAC, AIFF, Apple Lossless, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV na WMA. Njikọta na-agaghị enwe nsogbu, anyị ga- Wi-Fi 802.11b / g na 2,4 GHz na ọdụ ụgbọ mmiri 10/100 Ethernet (anyi achoghi otutu ozo maka egwu egwu). Ọzọkwa, ana m ahụ dị ka isi ọjọọ (na ihe ijuanya na ngwaahịa North America), na-enweghị 5 GHz Wi-Fi, nke ndị ọrụ na-achọwanye. Ọ na-aga n’ekwughị na ịbụ Wi-Fi ma ọ bụghị Bluetooth anyị ga-enwe ike iwepụta gburugburu Multiroom nke na-enye anyị ohere ịmepụta eriri egwu n’ụlọ anyị n’ụzọ kachasị mfe. The offline ọdịnaya abụghị nsogbu ma, ị ga-enwe na i nwere ikike music ọ bụla PC, Mac na nchekwa unit na ebe obibi gị na netwọk (ruo 16 dị iche iche na isi mmalite) ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ, ị nwekwara ike na-egwu songs si gị ama .
N'ihi na ndị hụrụ kpochapụwo ọ na-efu na ngalaba a (ọ bụ na nsụgharị ndị ọzọ nke obere Sonos) njikọta site na nkịta ọdịyo ọdịnala
Akụkụ ọzọ nke hụworo anyị n'anya bụ nke njikwa mmetụ maka ụda na egwu ndị dị n'elu. N'agbanyeghị nke a, nke a Sonos adịghị njikere ma ọ bụ chee echiche iji gbanwee iwu olu na ụdị ndị ọzọ ga-abịa n'ụdị ọgbara ọhụrụ dịka Sonos One. N'otu ụzọ ahụ, Sonos kwere anyị nkwa zuru oke na AirPlay 2, Apple ọhụrụ gụgharia ọdịnaya nnyefe protocol, na n'agbanyeghị na ọ natara abụọ mmelite na-adịbeghị anya ụbọchị, anyị enwebeghị ike ịnụ ụtọ a ọhụrụ Njikọta.
Ogo site na ọkọlọtọ, bụ ngwaọrụ Sonos
Enweghị m ike inwe obi abụọ ka m na-ede ahịrị ndị a, enwere m ike ịnwe ngwaọrụ nke njirimara ndị a na ụda kachasị mma nke m nyochara. Mana n'ezie, anyị na-eche ihu igwe okwu ikuku na ọgụgụ isi na-efu ihe ọ bụla na ihe na-erughị narị mmadụ ise. Enweghị m mmechuihu maka otu oge, anyị amatalarị ihe niile gbasara Sonos, mana Egwuregwu Sonos: 5 bụ ngwaọrụ nke nwere ike ghara ịnwụ n'ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke onye hụrụ teknụzụ n'anya na ọmarịcha., ikekwe nke a nwere ike ịbụ isi ihe mere ha ngwaọrụ mmeri na ọrụ nke Apple gburugburu ebe obibi ke ofụri ofụri.
Nke a bụ otú ha si nweta EISA 2016/2017 Award nke kacha mma Multi-Room ngwaahịa, anyị anaghịkwa ata ha ụta. Ma Spotify, ma ọ bụ site na Jack Jack ma ọ bụ site n'ụzọ ọ bụla ọzọ, anyị anaghị eme Sonos Play: 5 ịdaba na njehie n'ọnọdụ ọ bụla. Olu gbara ya gburugburu nke ọ na-enye pụtara na ịnwe otu n'ime ndị a bụ ụlọ sara mbara ị chọghị ihe ọ bụla ọzọ, o doro anya na nyocha gburugburu ebe obibi nke gụnyere ngwa ekwentị mkpanaaka ya-na isi okwu nke ngwanrọ ngwanrọ na-agbagharị- nwere ọtụtụ ịhụ na ya.
Ruo ugbu a, anyị anwalebeghị ụdị igwe okwu dị etu a, ma ọ bụrụ na ọ yiri ya, mana ọ bụghị nke ahụ ọ kpatara ọtụtụ ihe iji zụta ya, agbanyeghị na ndị ọkachamara n'ihe ọdịyo na-ekwu na ọ bụ ekwekọghị na Hi-Res Audio dị ka ntụpọ. Naanị m na-ahụ otu nkwarụ, nke ejikọtara ya na àgwà a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ihe mejupụtara ya, nke ahụ bụ eziokwu na ị gaghị enwe ike ịzụta ya n'okpuru € 500 n'ọnọdụ ọ bụla. Ma Ikwu eziokwu gị, ọ bụrụ na ụlọ gị jupụtara na teknụzụ ma ọ bụ na ị na-ewere onwe gị dị ka onye na-ahụ ọdịyo, ị gaghị eleghara Sonos Play: 5 system, ma ... ị dị njikere ịkwụ ụgwọ ya?
Zụrụ Sonos Play: 5 na Amazon
Zụrụ Sonos Play: 5 na weebụsaịtị Sonos
Enweghị airplay 2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Sonos Play: 5 bụ otu n'ime ndị ọkà okwu amamịghe kachasị elu na ahịa, anyị nyochara ya
WhatsApp Plus, ngwa nke na-ezobe nje dị ize ndụ
Imeri a Rowenta Air Force 360 ​​agụụ Cleaner na anyị kpam kpam free